Day: Ọktọba 25, 2019
Onye oru ulo oru aka na teknụzụ debara aha Kardemir R& D
KARDEMİR agbakwunyela ogige R&D ọhụrụ na Ngalaba Turkish steel. KARDEMİR R & D Center, nke KARDEMİR Board guzobere na Eprel 15 [More ...]
Mevlana Bridge Junction Traction Ndokwa
A ga-emechi TUPRAS na okporo ụzọ n'ihi Mevlana Junction. N'ime ogo nke ihe ọmụmụ a, a na-ekpebi ụzọ ụgbọ ala ga-adị nwa oge maka ndị njem na nke ọha iji gbochie nsogbu ụmụ amaala. XBỌCHAY 4 GA-EKWU TÜPRAŞ Hamsu [More ...]
Njem njem nke ọdọ mmiri malitere: Minister Turhan, ọdụ ụgbọ oloko Isparta rutere n'ememe mbụ nke Isparta-Izmir nke ememme njem Isparta-Izmir nke mbụ, Isparta mara mma na mba na ụwa, iji mee ka uru nke obodo ahụ dịkwuo elu, [More ...]
"Central Asian Railway Summit" akpa 21-24 October 2019 ụbọchị nke Republic of Turkey State Railways (TCDD), kwadoro Iranian Railways Organization, Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways na ẹkenịmde ke Ankara na òkè nke Turkmenistan Railways nnọchiteanya. [More ...]
Njikọ akwa nke 6, nke Denizli Metropolitan Obodo nyere n'oge na-adịbeghị anya, ejirila narị puku 141 350 puku taa. Citizensmụ amaala nwere ike ịchekwa mmanụ nde pensụl maka ego ụgbọ njem na Denizli [More ...]
15 July Democrati Bus Station Nchapu Nkọwa Ọrụ
15 July Democratic Democracy Station (Greater Istanbul Bus Station) Istanbul Metropolitan Municipal (IMM) na-ebuo mkpochapu na nhicha nke ulo a gbahapụrụ agbahapụ na nke dị ize ndụ. 15 July Democratic Democrati Station (Grand Istanbul Bus Station) [More ...]
Emechara Gaziray% 99
A na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na obodo metro, nke ezubere ka emejuputa ya iji wee gboo nsogbu njem njem, nke bụ otu n'ime nsogbu kachasị na Gaziantep na-aga n'ihu. Chọọ maka akụrụngwa maka usoro metro ahụ, nke ga-amalite site na Hospitallọ Ọgwụ City ma gbasaa na Station Square. [More ...]
Teknosab Train Speed ​​Speed ​​ga-agbatịkwu Karacabey na Bandırma ..!
N’oge na-adịbeghị anya; Mgbe Karacabey gara n’ihu n’ihu n’iwe n’ike n’ike n’ike yana mmepe mmekọrịta ọha na eze, ọdịnala na akụnụba, itinye ego ọhụụ ga-enye nnukwu aka na mpaghara bịara. Onyeisi obodo Karacabey [More ...]
Aro ohuru maka igwe eletriki eletriki maka nrọ Van
Van nọ na-eche ihe nlereanya ọhụụ maka njem ụgbọ njem na njem ọha maka ọtụtụ afọ. Karịsịa afọ gara aga, ọrụ ahụ iji mepụta oke nkwupụta ọha na eze gbasara tram [More ...]
Onye otu AK Party Aydin osote Metin Yavuz, nke mejupụtara ebe dị mkpa na mkparịta ụka ahụ obere oge na Aydin 'Double Line Railway Project' ga-ebido n'ihe gbasara 2020, o kwuru. Ihe oru ngo nke uzo abuo na uzo uzo abuo na Aydın [More ...]
Fatih Dönmez, onye Mịnịsta nke ike na akụ ndị sitere n'okike, gara TÜVASA place nke mere na Mgbakọ R&D & Innovation. Onye isi njikwa TÜVASAŞ Dr. İlhan Kocaarslan na nguzobe nke Fatih Dönmez [More ...]
Onye na-esote Mịnịsta nke ụlọ ọrụ na teknụzụ Hasan Büyükdede gara na Abant İzzet Baysal University Rector Prof.Dr.Mustafa Alişarlı na TÜVASAÜ Onye isi oche na onye isi njikwa Prof.Dr.İlhan Kocaarslan n'ọfịs ya. Onye isi ala, General [More ...]
'Ọgbọ Na-agafe: Ihe nkiri Foto nke Haydarpaşa
Ihe ngosi foto nke Hatice Ezgi Özçelik Tren No Train Gafere: Haydarpaşa X na-eche ndị ọbịa na Kadıköy Manço Cultural Center n'etiti Ọktọba na Ọktọba. Ọdụ Ragbọ Mmiri Haydarpaşa, ihe nketa ọdịbendị nke Kadıköy [More ...]